Izao No Zava-Mitranga Rehefa Mihantsy Andian’Olona Bodista · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Avrily 2016 10:43 GMT
Tamin'ny Febroary 2012, nandehandeha teo amin'ny Katedralin'i Kristy Mpamonjin'ny Fiangonana Ortodoksa Rosiana ao Moskoa ny vehivavy dimy, nametaka sarontava miloko isan-karazany, ary avy eo naka sary ny tenany sady nitsambikina sy nipelipelika manodidina. Nanampy hira tamin'ny lahatsary ilay vondrona tatỳ aoriana ary farany nitarika ho any amin'ny raharaha malaza ratsin'ny Pussy Riot tao Rosia, voaheloka am-ponja noho ny heloka bevava fankahalana ara-pivavahana ny telo tamin'io tarika io.
Efa noafahana efa ho roa taona mahery izao ny vehivavin'ny Pussy Riot , nefa mety hahazo namana tsy ho ela ao amin'ny tantaran'ny heloka bevava mamely ny fivavahana ao Rosia. Tamin'ity indray mitoraka ity, na izany aza, dia tsy teo ny Kristianisma, ny nahavita izany dia mpanao fampisehoana tolona avy ao amin'ny Repoblika betsaka Silamo ao Dagestan, ary ireo niharam-boina izay tezitra dia ny Repoblikan'i Kalmykia misy Bodista 107.000.
Ny fanafintohinana izay mety handefa lehilahy Dagestani 22 taona ho any am-ponja mandritra ny telo taona dia nanomboka tamim-pahatsorana: nitsidika an'i Elista, renivohitr'i Kalmykia, mba hanatrika ( fa tsy handray anjara ) amin'ny fifaninana tolona ny ekipa mpanao tolona. Ny harivan'ny Asabotsy, 2 Aprily, rehefa avy niravoravo alina, nandeha tao amin'ny tempoly Bodista ilay zatovo sy ny namany. Rehefa avy naka aina tao amin'ny tempoly, nanapa-kevitra ny hampiseho ny fahaizany manao daka avo ny lehilahy, ary niantso ny namany mba haka sary azy mandefa ny tongony ho amin'ny vava sy ny oron'ilay sarivongana Buddha goavana. Nanaiky izy ireo, dia nataony ilay daka, ary nalain'ireo sary, ary nandefa azy tamin'ny Periscope, fandefasana lahatsary mivantana tao amin'ny Twitter. Avy eo dia niverina nody tany amin'ny trano fandraisam-bahiny izy ireo.
Fiampangana heloka bevava ho naniratsira ny mahamasina ny sarivongan'i Buddha tao Kalmykia
Ora maro tatỳ aoriana, ny sasakalina, taitra tamin'ny hiakan'andian'olona romotra ny ekipa . Raha ny fandehany, nalaza ary niparitaka be ilay lahatsarin'ny Bouddha nahazo daka eo amin'ny tarehiny, ary tsy ela ny Bodista ao Kalmykia ny hanenjika toy ny rivotra.
Rehefa nobedain'ny polisy, ilay mpanao tolona dia nentina teo amin'ny vahoaka, nilaza izy fa tsy fantany hoe tao amin'ny tempoly bodista tamin'ny naka ilay lahatsary. Indrisy anefa ho azy, fa vao maika naha-tezitra ny mpihaino izany, izay nanery azy ny farany handohalika sy hiala tsiny amin'i Bouddha. (Misy sary avy any ivelan'ny hotely hita ao amin'ny YouTube. Amin'ny teny Rosiana izany, fa ny fahatezerana teo amin'ny feon'ny vahoaka dia mbola tsapa mihitsy na tsy manana fahaizana miteny Rosiana haingana ary.)
Rehefa nivory ny vahoaka ka nimonomonona teo ivelan'ny trano fandraisam-bahiny misy ilay mpanao tolona, dia nanao ny asany haingana ireo manam-pahefana ao an-toerana . Tsy ela fa namoaka fanambarana iraisana (navoaka tao amin'ny YouTube avy hatrany), i Alexey Orlov, mpitarika ny Repoblikan'i Kalmykia, sy i Abdusamad Gamidov, praiminisitr'i Dagestan, ary tao izy mirahalahy no nanantitrantitra ny firahalahiana sy ny fifandraisana teo amin'i Kalmykia sy i Dagestan. Nanambara i Gamidov fa voaroaka ny mpanazatra ny ekipan'ny mpanao tolona, ary nofoanana ny fifaninanana tolona, efa nody avokoa ny mpilalao Dagestani rehetra sy Chechen rehetra. Ny fanambarana voarakitra , izay manasongadina roa lahy mijoro mifanakaiky toa sadaikatra mifandimby niteny dimy minitra avy, dia nisy nijery mihoatra ny 75.000 tamin'ny fotoana nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy.
Alexey Orlov, ny lohan'ny repoblikan'i Kalmykia, sy Abdusamad Gamidov, praiminisitra Dagestan, mampatsiahy ny olona rehetra ny maha-pinamana azy ireo. Sary: YouTube
Nanambara i Orlov fa notazomina any amin'ny polisy ankehitriny ilay mpanao tolona nanome daka avo ny Buddha, miatrika fiampangana heloka bevava tamin'ny “tsy fanajana miharihary sy mivandravandra ny fiaraha-monina sy fikasana hanohintohina ny fahatsapan'ny mpino ara-pivavahana “.Satria natao tao amin'ny tempoly ny hetsika, dia tafakatra herintaona ka hatramin'ny telo taona an-tranomaizina ny sazy ambony indrindra. Ny lalàna azo ampiharina amin'ity tranga ity, araka an'i Orlov, dia nosoniavin'i Putin tamin'ny Jona 2013, taorian'ny fitsarana an'i Pussy Riot (na dia nahavita telo taona tany am-ponja aza ny mpanao punk mpiangaly gadona rock, talohan'ny nikarakaran'ny mpanao lalàna fiarovana omen'ny lalàna amin'ny “ny fihetseham-pon'ny mpino “).